Maqaalka Andrew Davis ee Martech Zone |
Maqaallada by Andrew Davis
Waxay leeyihiin "lacagtaada dhig meesha afkaagu yaalo." Hagaag, ereyga dariiqa, iyo malaha waddo kasta oo adduunka ah, waa in Google iyo Amazon ay yihiin kuwa sameeya lacagtaada markay tahay tafaariiqda internetka. Google Shopping iyo Amazon Product Ads shaki la'aan waa labo ka mid ah kuwa ugu firfircoon, taraafikada-lacag bixinta isbarbardhiga makiinadaha dukaamaysiga (CSEs) ee jira. Laakiin qof walba wuu ogyahay taas. Waxa ugu badan ee aan garanaynin waa heerarka dhulka hoostiisa ee kooxaha waaweyn ee CSE: The
Sideed Ugu Baahan Tahay Inaad Online Ka Iibiso
Isniin, Janaayo 14, 2013 Khamiis, Juun 18, 2015 Andrew Davis
Xulashada meesha aad ku iibin karto alaabadaada internetka waxay u noqon kartaa xoogaa sidii aad u iibsan laheyd gaarigaaga koowaad. Waxa aad doorato waxay kuxirantahay waxaad raadineysid, liiska xulashooyinkuna wey badnaan karaan. Meelaha e-commerce ee bulshada waxay bixiyaan fursad ay ku xiriiraan macaamiil aad u ballaaran laakiin waxay jaraan faa iidooyin badan. Haddii aad rabto inaad si dhakhso leh u iibiso oo aadan ka walwalin xad-dhaafyada, waxay noqon karaan kuwa kuugu fiican.
Istaraatiijiyadda CPC waxay uruurisay xogta in ka badan 100 tafaariiqle oo khadka tooska ah ku kala duwan, qiyaastii 4.2 milyan oo guji iyo 8 milyan oo dakhli ah si loo go'aamiyo isbarbardhigga ugu wanaagsan matoorada wax iibsiga ee khadka tooska ah. Isbarbardhiga mashiinnada wax iibsiga waxaa ka mid ah bogagga internetka sida Pricegrabber, Nextag, Amazon Product Ads, Shopping.com, Shopzilla iyo Google Shopping. Daraasadda waxaan ku lafagureynaa goobaha dukaamaysiga ugu wanaagsan ee taraafikada ganacsiga, dakhliga, sicirka beddelka, qiimaha iibka, iyo qiimaha halkii guji, oo aan ku darno
Amazon iyo Dunida!
Arbacada, December 21, 2011 Khamiis, Juun 18, 2015 Andrew Davis
Amazon hadda waxay u taagan tahay mid ka mid ah ilaha tafaariiqda ugu awoodda badan adduunka. Iyada oo malaayiin macaamiil ah oo aad u adag iyo taageerayaal, waxay caqabad ku noqotay maahan kaliya tafaariiqleyda kale iyo kuwa ka baxsan, laakiin dhammaan kanaalada suuqgeynta ee internetka. Alaabada ugu cusub ee Amazon, Kindle Fire, waxay qaadatay xoogaa cambaareyn xun todobaadkii hore. Si kastaba ha noqotee, iibku wali wuxuu umuuqdaa inuu yahay mid bahalnimo ah, in kabadan 1 milyan Kindle (oo ay kujiraan Dabka Kindle) ayaa la iibiyaa usbuucii usbuuca saddexaad